ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပင်မစာမျက်နှာ အာဖရိကဘောလုံးပြိုင်ပွဲ ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
နောက်ဆုံးပေါ်နောက်ဆုံးရေးသားချိန် ဧပြီလ 12, 2020
LB ပြည့်နေတဲ့ဘောလုံးဘုရား၏အတ္ထုပ္ပတ္တိနှင့်အကောင်းဆုံးအမည်ဝှက်ခြင်းဖြင့်လူသိများသူနိုင်ငံတော်သမ္မတတင်ဆက်; '' မင်းကြီးသည်ဂျော့ဂ်ျ '' ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းအတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ရက်စွဲကိုမရောက်မှီတိုင်အောင်သူ၏ကလေးဘဝအချိန်ကနေသင်တို့ကိုမှတ်သားလောက်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ပြည့်ဝ၏အကောင့်တတ်၏။ အဆိုပါခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကျော်ကြားမှု, မိသားစုဘဝ, ဆက်ဆံရေးဟာအသက်နှင့်သူ့ကိုအကြောင်းကိုအခြားအ OFF-အသံနည်းနည်း-လူသိများအချက်အလက်များရှေ့တော်၌မိမိဘဝအတ္ထုပ္ပတ္တိပါဝငျသညျ။
ဟုတ်ပါတယ်, လူတိုင်းအတွက်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး d'သို့မဟုတ်နဲ့လိုင်ဘေးရီးယားသမ္မတအခန်းကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်. သိတယ်ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်အတော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်သောဂျော့ခ်ျ Weah ရဲ့အတ္ထုပ္ပတ္တိစဉ်းစားပါ။ အခုဆိုရင်နောက်ထပ်ခွင့်ပန်ပြီးမှမရှိဘဲရဲ့ Begin ကြကုန်အံ့။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘ0အစပိုင်း
ဂျော့ခ်ျ Tawlon Manneh Oppong Ousman Weah, မွန်ရိုးဗီးယား, အ 1st အောက်တိုဘာလ 1966 (အသက် 51) ရက်နေ့တွင်လိုင်ဘေးရီးယားမွေးဖွားခဲ့သည်။
သူ့ဖခင်ကွယ်လွန်သွားပြီးနောက်ဂျော့ခ်ျတကယ်ကသူ့အဘွားတို့ကဖွင့်ပြကြ၏။ သူကအနောက်ပွိုင့်, ရပ်ကွက်အတွင်းဂိုဏ်းများက operated တစ် shantytown ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ သူကအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါသည် Kru တောင်ဘက်-အရှေ့ပိုင်းလိုင်ဘေးရီးယားရဲ့ထံမှမိုဃ်းသီးကျထားတဲ့တိုင်းရင်းသားအုပ်စု, ဂရန်း Kru ကောင်တီ, တိုင်းပြည်ရဲ့အဆင်းရဲဆုံးဒေသများ၏တဦးတည်း။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင်
သူဝဲလ် Hairston High School မှာမွတ်စ်လင်ကွန်ဂရက်နဲ့အထက်တန်းကျောင်းမှာအလယ်တန်းကျောင်းတက်ရောက်သတင်းလေ့လာမှုများ၏သူ၏နောက်ဆုံးနှစ်တွင်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ 15 ၏အသက်အရွယ်မှာလူငယ်လွတ်မြောက်ခဲ့သူများလူငယ်ကလပ်များအတွက်ဘောလုံးကစားရန်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်တန်ခိုးကြီးသော Barrolle သူ 24 ပွဲအတွက် 23 ဂိုးသွင်းဘယ်မှာဘယျသူမှမအောငျက Eleven များအတွက်သရုပ်ဆောင်အခန်းကဏ္ဍယူဆအခြားဒေသခံဘောလုံးကလပ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့ amateurish ရာထူးတဆင့်ထပြီးနောက်တစ်ကင်မရွန်းကင်းထောက်သူ့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအပေါ်ဆုံးဒေသခံကလပ်, Yaounde ခြမ်း FC အသင်းများအတွက်သူ့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အဆိုပါကင်မရွန်းကင်းထောက် Claude သည် Le ရွိုင်း, မိုနာကိုမန်နေဂျာ Arsene Wenger AS မှ Weah ရဲ့စွမ်းရည်သတင်းလက်ဆင့်ကမ်း။ ဝင်းဂါးသည်ကိုယ်တော်တိုင်များအတွက်ကြည့်ရဖို့အာဖရိကမှပျံသန်း, ပြီးတော့သည်သူ၏ကလပ်မှ Weah လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
မိမိအဘောလုံးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူ့ကိုပြည်ပမှာရွှေ့ဖို့ခွင့်ပြုမပြုမီ, Weah တစ်ဦးအဖြစ်လိုက်ဘေးရီးယားဆက်သွယ်ရေးကော်ပိုရေးရှင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည် switchboard နည်းပညာရှင်။ သူကဥရောပတစ်အမှတ်အသားလုပ်လိုက်ဘေးရီးယား, ပထမဦးဆုံးဖြစ်လာပြီးနီးပါးသာ။ ကြွင်းသောအရာ, သူတို့ပြောသကဲ့သို့ယခုသမိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -relationship ဘဝ
Clar Weah ဂျော့ခ်ျ Weah ၏မယားသည်။ သူမသည်ဂျမေကာကနေမိဘအမြစ်များနှင့်အတူတစ်ဦး Nature အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအမေရိကတိုက်၏နိုင်ငံသားဖြစ်ပါတယ်။
သူမသည်သူမတစ်ဦးတိုးတက်နေတဲ့ကာရစ်ဘီယန်စားသောက်ဆိုင်နှင့်ကုန်စုံစတိုးဆိုင်အပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများသို့ပွေးလေ၏ဘယ်မှာဖလော်ရီဒါ, အမေရိကန်, ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။
အစီရင်ခံစာများအရ, ဂျော့ခ်ျနှင့် Clar Clar ဖောက်သည်တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုအရာရှိအဖြစ်အလုပ်လုပ်ခဲ့ဘယ်မှာ Chase ဘဏ်ဌာနခွဲမှာ US မှာတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူ့မျက်စိလှပသော Jamaican ဖမ်းမိသည့်အခါယခင်အေစီမီလန်တိုက်စစ်မှုးသတင်းများအရအကောင့်တစ်ခုဖွင့်ဖို့ဘဏ်သွားပြီခဲ့သည်။ ၎င်းတို့၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းစားရန်ဖြစ်တော်မူ၏အတွက်ပယ် ထား. Weah ကပ်တွယ်မှုကိုဖောက်ပြန်အတော်ကြာကောလဟာလကြားမှပိုမိုအားကောင်းကြီးထွားဖို့ဆက်လက်သိရသည်။
Clar, ကာရစ်ဘီယန်နွယ်ဖွားအမျိုးသမီးအများစုနဲ့မတူဘဲ, ဆင်မြန်းရိုးရှင်းစွာသူ၏ပြောင်လက်တောက်ပသောအပြုံးပင်ခက်ခဲအချိန်လေးအတွက်အတားအဆီးတွေကိုချိုးဖျက်နိုင်မယ့်တောက်ပမဟာဗျူဟာပေမယ့်ကြီးမြတ်စည်းရုံးရေးအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်သာမှတ်ယူသောသူသည်။ အနီးကပ်မဟာမိတ်အသိဉာဏ်နှင့် aura ၏အထူး type ကိုပိုင်သောသူကဲ့သို့သူမ၏ကိုဖော်ပြရန်။ အဆိုပါ Jamaican သူမ၏ခင်ပွန်းန်းကျင်ပါဝါအများကြီးသူ့အပေါ်။ ဂျော့ခ်ျ Weah Jr က Tita နှင့်တိမောသေ: သူတို့ကနှစ်ဦးစလုံးကလေးသုံးယောက်ရှိသည်။
တိမောသေ Weah, 1995 ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးရွှေဘောလုံး d'Or ဆုရှင်ဂျော့ခ်ျ Weah ၏သား, ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းနှင့်အတူသူ၏ပထမဦးဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဂျော့ခ်ျ Weah ရဲ့ Son- တိမောသေ
အဆိုပါ 17 နှစ်အရွယ်ရှေ့ဆက်အေစီမီလန်မှပြောင်းရွှေ့မှီ, လီဂူး 1 ကလပ်မှာသုံးနှစ်ကြာသောမိမိအဘ၏ခြေရာကိုနင်းအောက်ပါအတိုင်း။ တိမောသေ 2014 အတွက် PSG အသင်းရဲ့အကယ်ဒမီဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး U-15s နှင့်ဦး-19s နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအ featured ခဲ့သည်။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -မိသားစုဘဝ
သူ့ဖခင်ဝီလျံတီ Weah, Sr; စက်ပြင်ခဲ့သည် မိမိအမိစဉ်က Anna Quayeweah ရောင်းသူတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကညီအစ်ကိုသုံးယောက်, ဝီလျံ, မောရှေနှင့် Wolo ရှိပါတယ်။
ဂျော့ခ်ျ Weah အကြီးအကျယ်သည်သူ၏ကိုးကွယ်မှုခရစ်ယာန်အဖေဘက်ကအဖွားအားဖြင့်ကြီးပြင်းရသောသားသမီးများ၏တဦးတည်းခဲ့တယ်, မင်းသမီး Emma Klonjlaleh ဘရောင်းသည်သူ၏မိဘများနှင့်ကွဲကွာပြီးနောက်။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဥရောပအောင်မြင်မှု
ဟုတ်တယ်, သူကနည်းနည်းတရားဝင်လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ကုန်ကြမ်းအခွက်တဆယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Weah အစောပိုင်းသည်သူ၏ဥရောပအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် overmatched ထင်ရှား။ , သို့သော်အစွမ်းထက် 6'2 "တိုက်စစ်မှူးမကြာမီယှဉ်ပြိုင်ရန်ချီဆောင်ခြင်းကိုခံရသောအားနှင့်သေစေနိုင်သောအစွမ်းထက်ရည်မှန်းချက်ဂိုးသွင်းသို့တီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။
ပဲရစ်စိန့်ဂျာမိန်းမှတစ်ဦးကအပြောင်းအရွေ့သည်သူ၏ကလပ် 1993 အတွက်ပြင်သစ်ဖလားနှင့် 1 အတွက်လီဂူး 1994 ခေါင်းစဉ်အနိုင်ရကူညီနေသူ Weah များအတွက်ပိုပြီးကောင်းချီးဆောင်ခဲ့လေ၏။ အဆိုပါ 1994-95 ရာသီအတွင်းနီးပါးကိုလညျးမတားဆီးသူဟာပြင်သစ်နှင့်လီဂူးဖလားအောင်ပွဲမှ PSG အသင်းကိုသယ်ဆောင်နှင့်ချန်ပီယံလိဂ်ရဲ့ဦးဆောင်ဂိုးသွင်းအဖြစ်ပြီးလေ၏။ ယခုနှစ်ပြီးနောက်သူသည်တစ်နှစ်တာ-မကြုံစဖူးအောင်မြင်မှု၏အာဖရိက, ဥရောပနှင့်ဖီဖာကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအမည်ရှိ၏။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -တိုကျပှဲ
Weah ပျေါတူဂီနောက်ခံလူများ၏နှာခေါင်းကိုချိုးဖောက်ခြောက်ဥရောပပွဲစဉ်ကနေပိတ်ပင်ထားခဲ့သည် Jorge ကော်စတာ 20 နိုဝင်ဘာလ 1996 အပေါ်ချန်ပီယံလိဂ်အတွက်ပေါ်တိုမှာမီလန်ရဲ့သရေကျပြီးနောက်ကစားသမားများ '' ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းထဲမှာ။ Weah သူထံမှလူမျိုးရေးခွဲခြားကဲ့ရဲ့အတူတက်ချပြီးအပြီးစိတ်ပျက်အတွက်ပေါက်ကွဲခဲ့ကပြောပါတယ် ကော်စတာ အဆိုပါအဖွဲ့များသည် '' ချန်ပီယံလိဂ်နှစ်ခုစလုံးစဉ်အတွင်းကြောင်းဆောင်းဦးရာသီတိုက်စစ်ပါတယ်။
ကော်စတာ strenuously လူမျိုးရေးခွဲခြားမှု၏စွပ်စွဲချက်ငြင်းပယ်နှင့်မျှမမျက်မြင်သက်သေများ Weah ရဲ့စွပ်စွဲချက်မဟုတျဘဲပင်, မိမိမီလန်အသင်းဖော်အတည်ပြုရန်နိုင်အဖြစ်ယူအီးအက်ဖ်အေအားဖြင့်တရားစွဲဆိုမခံခဲ့ရပါဘူး။ Weah နောက်ပိုင်းတွင်ကော့စဖို့တောင်းပန်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဒီလူမျိုးရေးခွဲခြားစော်ကား၏စွဲချက်စဉ်းစားခဲ့သူပေါ်တူဂီကငြင်းပယ်ခဲ့သည်အသေရေဖျက်ဖြစ်ဖို့သူ့ကိုဆန့်ကျင်ညှိပြီးနှင့်တရားရုံးရန်လိုက်ဘေးရီးယားကိုယူ။
အဆိုပါအဖြစ်အပျက်မျက်နှာခွဲစိတ်ခံယူကော်စတာမှဦးဆောင်သူနောက်ပိုင်းတွင်သုံးပတ်အဘို့ဘေးချိတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအဖြစ်အပျက်နေသော်လည်း Weah နေဆဲ 1996 အတွက်ဖီဖာ Fair Play Award ဆုရရှိခဲ့သည်။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ဘာသာ
Weah ပြန် converting မီ, အစ္စလာမ်ဘာသာမှပရိုတက်စခရစ်ယာန်ဘာသာကနေကူးပြောင်း။ သူကမွတ်စလင်များနှင့်ခရစ်ယာန်များအတွက်ငြိမ်းချမ်းရေးတို့အတွက်မျှော်လင့်, သူတို့ကပြောပါတယ် "တဦးတည်းကလူ".
အောက်တိုဘာလ 2017 ခုနှစ်တွင်သူသည်လိုက်ဘေးရီးယားအထက်လွှတ်တော်အမတ်မင်းသား Yormie ဂျွန်ဆင်နှင့်အတူသင်းအုပ်ဆရာတီဘီယောရှု၏ထင်ရှားသောနိုင်ဂျီးရီးယားအသင်းတော်၌ပြောက်ခဲ့ပါတယ်။
TB ယောရှုသည် 2017 လိုက်ဘေးရီးယားရွေးကောက်ပွဲတွင် Weah ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထောက်ခံမှဂျွန်ဆင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်သော့ချက်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု allegedly ခဲ့သည်။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -လိုင်ဘေးရီးယား၏စစ်မှန်သောသားတော်ကို
လိုင်ဘေးရီးယားအတွက်တည်ငြိမ်အင်အားစုအဖြစ်ဘောလုံး၏အရေးပါမှုကိုသဘောပေါက်, Weah အမျိုးသားအသင်း, အလုံကြယ်များအတွက်ခရီးသွား, ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်လစာကုန်ကျစရိတ်အပေါ်သူ့ကိုယ်ပိုင်ပိုက်ဆံခန့်မှန်းခြေ $2သန်းနေခဲ့ရသည်။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -ပုဂ္ဂိုလ်
ဂျော့ခ်ျ Weah သည်သူ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးအောက်ပါ attribute ကိုရှိပါတယ်။
အားသာချက်: ဂျော့ခ်ျ Weah, သမဝါယမသံတမန်ရေး, လျောက်ပတ်, မျှတသောစိတ်, လူမှုရေးဖြစ်ပါသည်
အားနည်းချက်များကို: ဂျော့ခ်ျ Weah ကွေဖြစ်နဲ့ Self-သနားသဘောသဘာဝရှိပြီးနိုင်ဘူး။ ပိုများသောဒီတော့သူကထိပ်တိုက်ရှောင်နှင့်တစ်ဦးအာဃာတသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုဂျော့ခ်ျ Weah likes: သဟဇာတဖြစ်မှု, နူးညံ့သိမ်မွေ့, အခြားသူများနှင့်နောက်ဆုံး, ပြင်ပဘဝနှင့်အတူမျှဝေ။
အဘယ်အရာကိုဂျော့ခ်ျ Weah မကြိုက်: အကြမ်းဖက်မှုများ, မတရားမှု, loudmouths နှင့်ကိုက်ညီ။
အထွေထွေမှတ်စုတွင်, ဂျော့ခ်ျ, တရားမျှတသောငြိမ်းချမ်းသောဖြစ်တယ်, တစ်ဦးတည်းဖြစ်ခြင်းကိုမုန်း၏။ မိတ်ဖက်ကိုသူ့အဘို့အလွန်အရေးကြီးပါသည်။
ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်နဲ့ -သမတမင်းရာထူး
ဂျော့ခ်ျ Weah 2005 အတွက်ဒီမိုကရက်တစ်ပြောင်းလဲမှုများအတွက်ကွန်ဂရက်၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ်လိုက်ဘေးရီးယားရဲ့သမ္မတပွေးပေမယ့်စည်းလုံးညီညွှတ်ရေးပါတီ Ellen Johnson Sirleaf တစ်ခု Run-ချွတ်အတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ 2011 ခုနှစ်တွင်သူသည် CDC လက်မှတ်အပေါ်ကိုထပ်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဤအချိန်ဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဆာလိဖ်ရုံးထဲမှာရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ပညာရေး၏ Weah ရဲ့မရှိခြင်းတစ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးပြဿနာဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူဟာအုပ်ချုပ်ဖို့မထိုက်မတန်သည်မဟုတ်ဟုပြောသောသူတို့၏အမျိုးအမြင့်မားဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူကကနဦးသို့သော်ဒီအရာလေ့လာမှုမလိုဘဲဆုလက်မှတ်များကိုတစ်ဦး unaccredited ဒီပလိုမာကြိတ်ဖြစ်ပါသည်, လန်ဒန်မှာ Parkwood University မှအားကစားစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက် BA degree ကိုရှိသည်ဖို့ပြောဆိုထားသည်။ Weah ထို့နောက်မိုင်ယာမီမှာရှိတဲ့ DeVry တက္ကသိုလ်မှစီးပွားစီမံတစ်ဒီဂရီကိုလိုက်ကြ၏။
နိုင်ငံရေးထိုးနှက်နေသော်လည်း Weah သူ့အိမ်တိုင်းပြည်အတွက်ကျနော်တို့မှာအများကြီးသြဇာနှင့်လူကြိုက်များဖွယ်ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ရှိဆဲ။ ဧပြီလ 2016 ခုနှစ်, Weah ဒုတိယအကြိမ်လိုင်ဘေးရီးယားသမ္မတအဘို့ကို run ရန်သူ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘုရားသခငျသညျနောက်ဆုံးတော့လုပ်ကြံပြီးနောက်ဒီဇင်ဘာလ 2017 အတွက်လိုက်ဘေးရီးယား၏နိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည် ဒုတိယသမ္မတသည်ယောသပ် Boakai ။
သမ္မာကျမ်းအမှန်တရားစစ်ဆေးပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ဂျော့ခ်ျ Weah ကလေးဘဝပုံပြင်ပေါင်းမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိဖြစ်ရပ်မှန်ဖတ်နေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တွင် LifeBoggerကျနော်တို့တိကျမှန်ကန်မှုနှင့်တရားမျှတမှုများအတွက်ကြိုးစားကြသည်။ သင်ဤဆောင်းပါး၌တရားကိုကြည့်ရှုတော်မမူကြောင်းအရာတစ်ခုခုကိုကြည့်ရှုပါလျှင်, သင့်မှတ်ချက်ကိုနေရာကျေးဇူးပြုပြီးသို့မဟုတ် ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ!။
ဟိုင်သမ် Ziyech ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Medhi Benatia ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Nabi Keita ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Rigobert သီချင်းကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ဗစ်တာ Wanyama ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
မိုဟာမက် Elneny ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ခရစ်ယာန် Benteke ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Riyad Mahrez ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
Pierre-Emerick Aubameyang ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်ထားသောရက်စွဲ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၂၀
Yaya Tour ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်
ပြုပြင်နေ့စွဲ: သြဂုတ်လ 4, 2018
Wilfried Zaha ကလေးဘဝပုံပြင် Plus အားမရေမတွက်အတ္ထုပ္ပတ္တိအချက်အလက်